इलस्ट्रेटर | सँग समय बचत गर्न कीबोर्ड शर्टकटहरू क्रिएटिव अनलाइन
इलस्ट्रेटरको साथ समय बचत गर्न कीबोर्ड शर्टकटहरू
कहिले हामीले एउटा कार्यक्रमको साथ काम गर्न शुरू गर्यौं हामीनै पर्छ परिचित हुनुहोस् यससँग र उपकरणपट्टीलाई अनुकूलन गर्नुहोस् ताकि यो कार्य गर्नका लागि हाम्रो लागि अधिक सहज हो।
जब हामी काम गर्दछौं र हामी फ्लोन बन्छौं, हामी बुझ्दछौं कि त्यहाँ त्यहाँ उपकरणहरू छन् जुन हामी निरन्तर प्रयोग गर्छौं। त्यस कारणका लागि हामी तपाईंलाई शिक्षा दिन्छौं कीबोर्ड शर्टकटहरू लागि सकेसम्म धेरै समय बचत गर्नुहोस्.
जब तपाईं ग्राफिक डिजाइन मा काम Illustrator यो एक अपरिहार्य कार्यक्रम हो। को समय धेरै तंग छ र हामीले सकेसम्म समय बचत गर्नुपर्दछ। कुञ्जीपाटी सर्टकटको ह्यान्डलिंगको साथ धाराप्रवाह हुनु तपाईंको समयमा सुम्पिएका कार्यहरू समाप्त गर्न कुञ्जी हुन सक्छ।
1 इलस्ट्रेटरसँग काम गर्ने समय बचत गर्नुहोस्
2 सूचक परिवर्तन
3 क्लिपिंग मास्क
4 अन्तिम कला पठाउनुहोस्
5 मूल सर्टकटहरू
इलस्ट्रेटरसँग काम गर्ने समय बचत गर्नुहोस्
त्यसो भए हामी एउटा छाड्नेछौं सर्टकटहरूको सूची अभ्यासको साथ हामी सोच्न को लागी बिना सम्झना गर्न सक्षम हुनेछ।
सुरु गर्न, यो सूचक परिवर्तन (कालो र सेतो) स्थिर छ। मोटो रूपमा बोल्दा, कालोले सम्पूर्ण समूह चयन गर्दछ, जबकि सेतो एक विशिष्ट तत्वहरू वा परिमार्जक भेक्टरहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। यी बटनहरू हुन् जुन हामीले एक र अर्कोको लागि एकै समयमा क्लिक गर्नुपर्नेछ:
कालो सूचक: V
सेतो सूचक: A
La क्लिपिंग मास्क इलस्ट्रेटरमा अर्को प्रमुख उपकरण हो। यसको साथ हामी छविहरूको केही भागहरू लुकाउन सक्छौं वा अन्य धेरै स्रोतहरू माझ काट्न सक्दछौं।
क्लिपिंग मास्क: CMD + 7
अन्तिम कला पठाउनुहोस्
जब प्रदर्शन गर्दै अन्तिम कला सबै पदहरू हुनु पर्छ भेक्टर प्रिन्ट गर्न पठाउनु भन्दा पहिले। एक एक गरेर जानुको सट्टा, सब भन्दा चाँडो र सजिलो तरीका भनेको सम्पूर्ण आर्टबोर्ड चयन गर्नु र निम्न बटन क्लिक गर्नुहोस्।
भेक्टराइज: सीएमडी + SHIFT + O
Ir हाम्रो परियोजना बचत गर्दै निराश हुनबाट जोगिन यो आवश्यक छ। जब हामी धेरै घण्टा काम गरिरहेका छौं वा भारी छविहरू प्रयोग गर्दछौं, यो अचम्म मान्नु पर्दैन कि हाम्रो कम्प्युटर स्थिर छ। प्रोएक्टिभ नभएको र फाईल नियमित रूपमा बचत गरेर गरेको सबै काम हराउन हामी पहिलो हुने छैनौं। यसलाई बचत गर्ने बानीमा जान सजिलो छ यदि यो समयको बर्बादी छैन भने। निम्न बटनहरूको साथ हाम्रो परियोजनाहरू सुरक्षित हुनेछन्.
फाईल बचत गर्नुहोस्: CMD + S
यदि हामी गलत थियौं र हामी सुधार गर्न चाहन्छौं हामी निम्न संयोजन थिचेर यो गर्न सक्दछौं:
कार्य अन्डु गर्नुहोस्: CMD + Z
हामी अभ्यास गर्नै पर्छ, यो सामान्य छ कि सुरुमा तपाईले सबै बटनहरू याद गर्नुहुन्न। एउटा चाल हो स्क्रीनको छेउमा एक चिया पाना प्राप्त गर्नुहोस् सबै सर्टकटको साथ। त्यहाँ एक दिन आउनेछ जुन तपाइँले यसलाई साकार नगरी तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्रिक्स » इलस्ट्रेटरको साथ समय बचत गर्न कीबोर्ड शर्टकटहरू
मार्क एडवर्ड्सको मद्दतले छिटो उत्तम देखिने भेक्टर आइकनहरू सिर्जना गर्नुहोस्